Shiinaha Customized Oo tayo leh jiifku Server, jiifku warshadaha, Qalabka jiifku xigasho, Warshad - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
3U 16HDD shaashadda serverka
2U 12HDD shaashadda serverka
1U 4HDD shaashadda adeegga gaaban
Shirkadda Goldenor Electronic Technology Co., Ltd. waxay midaynaysaa R&D, waxsoosaarka iyo iibinta, oo ku hawlan naqshadaynta iyo soosaarida jiifku, shaashadda adeegga, iyo mashiinka warshadaha. Shirkadda waxaa la aasaasay 9/17 ee 2014. Sannadkii 2015, waxay soo saartay badeecooyin u gaar ah oo u gaar ah. Sannadkii 2016, waxay ku guuleysatay shixnad bille ah 5,000 oo unug oo ah alaabooyinka caadiga ah iyo 30,000 oo unugyo ah sannadka 2019. Shirkaddu waxay leedahay xaashi sax ah xaashida birahaï¼ˆNCTï¼ ‰, naqshadeynta caaryada iyo soo saarista, iyo shaambadaynta. Wax soo saarka, rinjiyeynta iyo awooda isku imaatinka. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay u qaadataa baahida macaamiisha inay tahay udub dhexaad waxayna soo uruurisay koox tayo sare leh oo ku saabsan tiknoolajiyada xirfadeed, waxayna ku dadaaleysaa inay macaamiisha siiso hal-joogsi xalka guud ee loo habeeyay oo ka yimaada hal-abuurnimada naqshadeynta illaa soosaarka maanta yihiin kuwo si heer sare ah loo wada midoobay. "Deg deg ah, xad dhaaf ah, oo hal abuur leh" waa falsafada ganacsiga ee Goldenor, "fur, abuur, oo wadaag" waa falsafada maaraynta ee Goldenor. Aragtidayadu waa fikrad cusub oo caalami ah iyo qaabeyn tayo sare leh oo loogu talagalay qaabeynta iyo soosaarida serverka, "macaamiil udub dhexaad u ah" Abuuritaanka qiimaha ay aqoonsanyihiin macaamiisha, in dadka la hor mariyo, in halgamayaasha lala wadaago hantida shirkadda "waa qiimeheena asaasiga ah." "waa baacsiga joogtada ah ee dhamaan xubnaha Goldenor. Waxaan sii wadi doonaa inaan ka badino nafteena oo aan macaamiisha siino badeecooyin iyo adeegyo wanaagsan! Baaxada dalabka alaabada: jaakada wax lagu keydiyo, adeegaha kumbuyuutar kumbuyuutareedka, dariiqa keydka daruuriga, qalabka warshadaha, Nidaamka ilaalinta fiidiyowga, nidaamka korantada , Serverka GPU, kumbuyuutarka gees.